Ụbọchị My Pet » Top US Cities maka Single Women
E nwere ụfọdụ ihe na-eme ka a ebe kwesịrị ekwesị maka otu nwanyi; oké ebe hangout, ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ nke ọma, ezi na-achọ na-akpali otu ụmụ okorobịa, ike nri bụ n'ezie ụfọdụ n'ime ha. The obodo ndị inyom ndị a na-ahọrọ na-ebi ga-enwe ọtụtụ n'ime ndị ihe ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile. Ndepụta top US obodo maka otu inyom ị ga-ahụ n'okpuru a kwadebere ihe a nso nke dị otú ahụ ihe.
1. Chicago: Ebe A, inyom a nwere ike na-enweta zuru okè obodo ukwu si ebi ndụ; ọ bụ a n'ezie vibrant obodo, ma ọ bụghị dị ka mpako New York City. Chitown, dị ka ndị obodo ahụ obi ụtọ na-ezo aka obodo ahụ dị ka, bụ a-ehiwe ndị mara mma, omenala na akụkọ ihe mere eme. Ozugbo ị bụ ndị a na obodo, ị ga-dị nnọọ asị na-ahapụ ya; ọ bụ kwajuru na trendy agbata na ọmarịcha osimiri.
Ya mere, otú ọma bụ Chicago kpọmkwem maka otu nwanyi? Oprah Winfrey, kasị eru otu inyom na mbara ala a, bi ebe a; nke a kwesịrị ikwenye na obodo ahụ bụ na-akpali akpali ezuru gị na-ebi ndụ.
2. Los Angeles: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nụ ụtọ ndụ n'ụzọ kwekọrọ nnọọ dị ka otu nwaanyị, ị pụrụ ịtụle bi Los Angeles. Nke a na-omimi ala jupụtara na ezi-na-achọ ma mara ndị ikom; otú, mgbe ị na-ebe a, ịchọta onye na-akpali mmasị fechapụta agaghị abụ nsogbu.
Ọzọ nnukwu gbakwunyere nke obodo bụ ịrịba Ọnọdụ Ihu Igwe ọ na-arụ ihe niile site na afọ. Mma ihu igwe ga-anọgide na gị na elu mmụọ na ị ga-enwe ike ime ka ọtụtụ ndị oge ị ga-esi mgbe ọrụ. EBE AHỤ. ga-ekwe ka ị na-eme ihe niile si celeb sightings ka ụlọ ahịa na-eti na osimiri.
3. Boston: Single inyom chọta Boston anabata irrespective nke afọ otu ha na iso. N'ihi na ụmụ akwụkwọ, obodo nwere prestigious mahadum ebe ha nwere ike ina onwe ha debara aha na. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya zụọ ahịa na-achọ mgbe nile na-eyi ihe trendy, e nwere bụ Newbury Street, a zuru okè ebe ịzụ mmebe uwe.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-n'anya-agagharị gburugburu na-enwe fun, obodo nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme n'okporo ámá, ngosi ihe mgbe ochie, veranda, mgbakọ na ogige ntụrụndụ.
4. San Diego: San Diego mgbe a obodo na mba ndị kasị breathtaking saịtị ị ga-abịa gafee. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-alụbeghị di ma na-achọ nwere ụfọdụ ụtọ oge ná ndụ gị, ị pụrụ ịtụle na-akpụ akpụ San Diego.
Obodo na gbara gburugburu Pacific Ocean, n'ọzara na n'ugwu; nke a pụtara, mgbe ọ na-abịa adabara ebe ịga mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, e nwere otutu nhọrọ ịhọrọ site na. San Diego bụkwa n'ụlọ a n'ezie na-ekwo ekwo Ogbe.
5. Las Vegas: Gị inweta a kwesịrị ekwesị onye bụ ma eleghị anya kasị elu ma ọ bụrụ na ị na-Las Vegas. Dị ka a 2013 isiokwu e bipụtara na Forbes, a Nevadan obodo nwere ọnụ ọgụgụ kasị elu nke otu ndị ikom ọ bụla otu nwaanyị bi n'ime ya; nke ọ bụla otu nwaanyị, obodo nwere 1.34 ma. Nke a na atụmatụ nke obodo na-eme ka Las Vegas 5th entrant a na ndepụta nke top US obodo maka otu nwanyi.
All inyom si n'ebe ndị otu na ime atụmatụ dajụọ nke ọ bụla n'ime n'elu obodo ga n'ezie a mkpatụ ndụ.